ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နွေရာသီအလှကို ခံစားနိုင်တဲ့ လှပသောရှုခင်းကြည့်နေရာများ !!! - JAPO Japanese News
ဟူး 25 Aug 2021, 11:20 မနက်
အိုလံပစ်အားကစားသမားတွေဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နွေရာသီကို ပူအိုက်စိုစွတ်ပြီး နေလို့မကောင်းဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံးရာသီဥတုကို ပြောရရင် ချယ်ရီပန်းလှလှလေးတွေကို ကြည့်နိုင်တဲ့ နွေဦးနဲ့ မိုမိဂျိရွက်လေးတွေက လှပနေပြီး အရသာရှိတဲ့ အစားအသောက်တွေရနိုင်တဲ့ဆောင်းဦးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
နှင်းမကျတဲ့ဒေသကလူတွေကတော့ ဆောင်းရာသီမှာ ဂျပန်နိုင်ငံကို လာချင်တယ်လို့ ပြောချင်ပြောမှာဖြစ်ပေမယ့် နွေရာသီမှာ ဂျပန်နိုင်ငံကို လာလည်ချင်တယ်လို့ ပြောမယ့်သူက နည်းပါးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုလှပတဲ့ရှုခင်းကြည့်နေရာလေးတွေရှိရင် နွေရာသီမှာ လာလည်ချင်တယ်လို့တောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဂိဖုစီရင်စုမှာရှိတဲ့ ခိုတတိုရိမြစ်ဟာ ကြည်လင်တဲ့မြစ်ရေကြောင့် နာမည်ကြီးပါတယ်။
ရေကြည်တာက ဘာများကောင်းလို့လဲဆိုသူအတွက် ဒီလိုဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်နိုင်ပါတယ်။
လှေက လေထဲလွင့်မြောနေတာမဟုတ်ဘဲ ရေထဲမှာပဲရှိနေပမယ့် ရေကြည်လွန်းလို့ ရေအရိပ်တောင် မမြင်ရအောင်ပါပဲ။
ရေမျက်နှာပြင်ပေါ် အလင်းရောင်က ရောင်ပြန်မဟပ်ရင် လေထဲမှာလွင့်မြောနေသလို ခံစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါသူတွေအနေနဲ့ Circular PL filter ကို သုံးပြီးရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင် လေထဲမှာ ပိုပြီးလွင့်မြောသလိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဂန်းမစီရင်စုမာရှိတဲ့ နာမည်ကျော်ရေပူစမ်းဒေသဖြစ်တဲ့ ရှိမရေပူစမ်းရဲ့ နာမည်ကျော်နေရာထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ရှိမရေပူစမ်း (四万温) ရဲ့ ဇစ်မြစ်က ရောဂါပေါင်း ၄ သောင်းလောက်ကို ပျောက်ကင်းစေတယ်ဆိုတာကနေ ဆင်းသက်လာပါတယ်။
ဆောင်းဦးရဲ့ မိုမိဂျိရာသီဥတုမှာလည်း လှပပေမယ့် နွေရာသီမှာ သွားလည်သင့်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ် ညွှန်းဆိုချင်ပါတယ်။
စိမ်းပြာရောင်ရေလေးထဲကို နေရောင်ပြင်းပြင်း ထိုးဝင်နေတဲ့နွေရာသီဟာ အလှဆုံးအချိန်လို့တောင်ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုအရောင်လေးဟာ နွေရာသီရဲ့သင်္ကေတလို့ကို ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က အစိမ်းရောင်လေးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်မှုနဲ့ဆိုရင်တော့ အလှဆုံးနွေရာသီပါပဲ။
ဝခယမစီရင်စုမှာရှိတဲ့ချိုင့်ဝှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရေကလည်းကြည်လင်ပြီး ဖောင်စီးပြီး မြစ်နဲ့အတူ မြစ်တစ်လျှောက် လိုက်ပါစီးဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
ရေကလည်း ကြည်လင်လှပတဲ့အတွက် အသက်ကယ်အင်္ကျီသာ သေချာဝတ်ထားရင် နွေရာသီမှာ ရေထဲပြုတ်ကျသွားရင်လည်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။
ဒီနေရာကိုတော့ နွေရာသီမှာ သွားသင့်ပါတယ်။
ဆောင်းရာသီမှာ ရေထဲကို ပြုတ်ကျသွားရင်တော့!
နဂနိုစီရင်စုမှာရှိတဲ့ ရှိဂကုန်းပြင်မြင့်ဟာ UNESCO Eco Park အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရတဲ့ လှပတဲ့ကုန်းပြင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
စိမ်းစိုနေတဲ့တောအုပ်၊ ကောင်းကင်ပြာပြာ ပြီးတော့ ရေပြင်မှာထင်ဟပ်နေတဲ့ ကောင်းကင်ပြာပြာလေးနဲ့အတူ နက်ပြာရောင် တောက်နေတဲ့ကန်မျက်နှာပြင်။
ဒီရှုခင်းဟာ နေရောင်ပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာ အလှဆုံးရှုခင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နွေရာသီဟာ ပူအိုက်စိုစွတ်ပြီး အပြင်သွားလာရခက်ပေမယ့် နွေရာသီရဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အရာတွေကို ရှာတွေ့သွားရင် အကောင်းဆုံးရာသီဥတုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုရိုနာပြီးသွားရင် နွေရာသီမှာလည်း ဂျပန်နိုင်ငံကို လာလည်ပါနော်!
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နွေရာသီမှာ တရုတ်ခေါက်ဆွဲအေး သွားစားကြစို့